Daawo Haween Soomaaliyeed oo lagu falo beeraha Sweden - iftineducation.com
Daawo Haween Soomaaliyeed oo lagu falo beeraha Sweden
aadan21 / July 19, 2016
iftineducation.com – Daawo Haween Soomaaliyeed oo lagu falo beeraha Sweden
Iyadoo ay aad u sarayso heerka shaqo la’aanta ee dumarka Soomaalida ah ee Sweden ku nool, ayaa mashruuc laga sameeyay beer ku dhow magaalada Linköping waxaa haweenka Soomaalida laga siiyay shaqo ay beeraha ku falaan. Haweenkaan ayaa waxay beerta uga shaqaynayaan sidii mashiinada.
Haweenka Soomaalida ayaa u sheegay warbaahinta in ay aad ugu faraxsanyihiin shaqada ay ka heleen beerta. Qaar ka mid ah haweenka ayaa beeralay ahaa markii ay Somalia ku noolaayeen, halka qaar kale aysan waligood beer ka shaqayn.
Halkaan ka daawo Haween Soomaaliyeed oo lagu falo beeraha Sweden
Dawo Sawirarada Tuug U Dhacay Guriga Jose Morinho.
galmada gabadha koreyso geedka raga ku fadhiisato